Nyefee na SMS ka iOS 7 si Old ekwentị mkpanaaka na (iOS, Android, Symbian)
> Resource> Nyefee> Nyefee SMS si iOS, Android, na Symbian ekwentị mkpanaaka na iOS 7/8/9
"Dị nnọọ zụtara nwunye m ihe iPhone 5S dị ka a ụbọchị ọmụmụ onyinye. Ma o kwesịrị transfer ozi ederede site ochie android ekwentị ọhụrụ iOS 7.-a? Bụrụ otú ahụ, otú e si eme ya?"
Ọ na-kwesịrị ịbụ ahụmahụ dị ụtọ ka ịgbanwee gaa na ihe iPhone na-agba ọsọ iOS 7. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị mere mkpesa na ha nwere ike ghara nyefee ozi ederede site ochie ntị (iOS, Android, ma ọ bụ Symbian) ọhụrụ iOS 7 ngwaọrụ. N'ihi nke a, ha nwere ike ghara ịnọgide na ụfọdụ mkparịta ụka were were. Mgbe m igwu a ogologo oge n'elu Internet na-achọ ụzọ idetuo ozi ederede na iOS 7 ngwaọrụ, m na-eche na m ga-akwado gị Wondershare MobileTrans.
Wondershare MobileTrans Bụ a keukwu ngwá ọrụ na-enye gị ohere nyefee ozi ederede site na ekwentị mkpanaaka na-agba ọsọ iOS 6 na mbụ, Android, na ọbụna Symbian ka iOS 7 ngwaọrụ. Ma ọ bụ mfe iji. Ọbụna ị amaghị ọtụtụ nkà banyere ntị, ị nwere ike mfe ime ka ọ na-arụ ọrụ. N'okpuru ebe a, ka na-anya na otú nyefee SMS ka iOS 7 si iOS 6, Android, na Symbian (Nokia). Iji Mụta MobileTrans akwado ngwaọrụ, biko pịa ebe a >>
Download Wondershare MobileTrans ikpe mbipute!
Mgbe ị download Wondershare MobileTrans na wụnye ya na gị Windows PC. Ọ nwere enweghị nsogbu na-agba ọsọ Windows 10, Windows 8, Windows 7 nakwa dị ka ndị ọzọ na Windows arụ ọrụ usoro dabeere kọmputa. Ẹkedori ya ozugbo mgbe wụnye usoro.
Nzọụkwụ 2. Copy SMS ka iOS 7
Nyefee SMS si iOS 5, iOS 6 ka iOS 7/8/9
Jikọọ iOS 5 ma ọ bụ iOS 6 dabeere Apple ngwaọrụ na gị iOS 7 ngwaọrụ gị na kọmputa site na 2 USB cables. Na mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na ha na-egosipụta akụkụ site n'akụkụ. Na ohere n'etiti ha, ị kwesịrị ị na ego ozi ederede igbe na-amalite na-ebufe SMS si iOS 5 ma ọ bụ iOS 6 ngwaọrụ ka iOS 7 ngwaọrụ.
Detuo SMS site na Android ekwentị iOS 7
Jikọọ gị android ekwentị nakwa dị ka gị iOS 7 ngwaọrụ gị na kọmputa. Wondershare MobileTrans Ga chọpụta ha ọsọ ọsọ na-egosipụta na ha na isi window. Na mgbe ahụ, ị nwere ike ịlele ozi ederede igbe idetuo SMS si Android ekwentị gaa na iOS 7. E wezụga, ederede ozi, ị na-enwe ike detuo kọntaktị, videos, foto, na music ka iOS 7. Ị nwere ike gụọ otú nyefee SMS si gam akporo ka iPhone ebe a >>
Send SMS si Symbian (Nokia) ntị ka iOS 7
N'ihi na Symbian ntị, ọtụtụ ndị ọhụrụ Nokia igwe na-n'ụzọ zuru ezu na-akwado. Dị nnọọ ka n'elu kwuru banyere nzọụkwụ, dị nnọọ jikọọ gị iOS 7 na Symbian ekwentị na kọmputa. Ego ozi ederede na pịa Malite Copy iji malite usoro.
Nke a video-egosi gị otú ịkwaga SMS ka iOS 7
Download software idetuo SMS ka iOS 7 ugbu a!